यी महिला भन्छिन: म सँग रात बि’ताउन आएको युवा मेरो स्त’नपा’न गरेर फर्कियो… पूरा पढ्नुहोस « गोर्खाली खबर डटकम
यी महिला भन्छिन: म सँग रात बि’ताउन आएको युवा मेरो स्त’नपा’न गरेर फर्कियो… पूरा पढ्नुहोस
२०७७ कार्तिक १४ गते शुक्रवार प्रकाशित
सुनिता दनुवार- एक पटक एउटा अ नौंठो घ टना भयो। सायद को’ठीहरुमा अप’वादका रुपमा हुने घ टना। एकपटक हाम्रो बंगलामा मो जम स्तीका लागि कलेजका केही केटाहरु आएका थिए। ती केटाहरु आ आफुले म न प राएका केटीहरु बोकेर कोठामा गए।
ती मध्येकै एउटा केटाले मलाई राज्यो र मेरो कोठामा आयो। त्यती बेला म कलिलै थिएँ। भर्खर बच्चा जन्मिएकाले मेरो स्त नबाट दु’धका धारा चुहिरहेको थियो। नि पल अलिकति निचोर्दा नै दु ध चुहिन्थ्यो। कलेजको त्यो भर्खरको केटाले छा तीमा त्यसरी दुध बगेको देखेछ।
उ निकै आश्चर्य चकित भयो। उसल्यो भन्यो, ‘मलाई तिमिसंग अरु केही गर्नु छैन। बस मलाई यो दुध खान देऊ ।’ ‘के नचा’हिदो कुरार गर्छौ? ’ब’रबराउँदै भनें, ‘क्या! खुस्केटहरु आउँछन्।
‘मलाई यहाँ यस्तो काम हुन्छ भन्ने पहिला थाहा थिएन। म त केटाहरुको ल’हलहैमा लागेर आएको। यहाँ आएपछि तपाईलाई भेट्दा मैले आमालाई भेटेजस्तो लाग्यो। मैले आजसम्म आमाको दु ध खान पाएको थिइन, त्यसैले तपाईलाई आमा बनाउन चाहेको हुँ, उसले भावुक हुँदै भन्यो।
उसको कुरा सुनिसकेपछि म पनि अलि भावुक भएँ। यदि कसैले मलाई ‘आमा’ स म्वोधन गरेर स्त नपानको याचना गरिरहेको छ भने त्यस्तो बेला के गर्ने? म केही पल अल’मलमा परेकी थिएँ। आखिर मलाई लाग्यो, जव उसले मलाई आमा नै भनिसकेको छ भने उसलाई छोरा मानेर स्त’नपान गराउन केको आपत्ति?
“होईन! मैले तिमिसंग म जाक गरेको होइन! मलाई दुध खान देऊ!” उस्ले भन्यो। ‘किन त्यसो भनेको?’ मैले जि ज्ञासा राखेँ। ‘मैले आजसम्म आमाको दु’ध खाएको छैन। अबदेखि तिमी मेरा लागि आमा समान् हौ। म तिमीलाई एउटी आमा सहर सम्मान गर्छु।
प्लीज, म लाई दु ध खान देउ’, उसले भन्यो। मेरो लागि त्यो बडा अ’नौठो प्रस्ताव थियो। सुरुमा त मलाई ‘कस्तो दि माग ख राव भएको ग्राहक आयो’ भन्ने लागेको थियो। सुरुमा एकदम रि स पनि उठ्यो। ‘तिमीलाई मैले दु ध चु साउनै पर्छ भन्ने छ र? जे कामको लागि आएको हो त्यही गर’, मैले रि’साउँदै भनें।
खै कुन अन्र्तप्रे’रणाले हो, मैले सरलाई स्त’नपान गराएँ। कुनै पनि स्त्री र पुरुषबीच सम्वन्धका विविध आयाम हुन्छन्। त्यो केटाले हाम्रो स म्वन्धलाई यौ नक र्मी र ग्राहकको स म्वन्धबाट माथी उ’ठाएर एकैचोटी आमा र छोराको सम्वन्धमा पुर्याएको थियो।
‘काम वा’सना’ बाट एकैचोटी माथी उठेर त्यो केटोले मबाट ‘मातृ वा त्सल्य’को चाहना प्रकट गरिरहेको थियो। स्त नपा न पछि उसले मलाई तिन चार पटक ध न्यवाद दियो। उसले के पनि भन्यो भने उसको बा ल्यका ल डि कै भरमा बितेको रहेछ र उसले पहिलो पटक कुनै आ माको दु’ध चु’स्न पाएको रहेछ। उसका कुरा सुनेर एकाएक मेरा आँखा र’साए।
दु’ध चु’सेर ‘छोरा’ गइहाल्यो, तर त्यो अ नौठो घ टनाले यता ‘आमा’लाई पछिसम्म पि’रोली रह्यो, भा वुक बनाइरह्यो। आखिर त्यस्ता उच्च चेतना भएका मानिसहरु पनि कहिलेकाँही बरा’लिएर को’ठीसम्म आईपुग्दारहेछन् र आफ्नो विवेक, क रुणा र प्रेम प्रकट गरेर जाँदा रहेछन्।
मैले नजन्माएको त्यो ‘छोरो’ आज कहाँ होला, मलाई थाहा छैन। तर जँहा भए पनि त्यो छोरालाई यो आमाको सदा आर्शिवाद रहने छ। सुनिता दनुवार द्धारा लिखित आँ सुको श क्तिबाट।
विराटनगर–काठमाडौं ‘बुलेट एसी’ बस सञ्चालनमा, छुटपछिको भाडा १५ सय
बर्ष दिन नवित्दै बाबु,बाजे र बजैको किरिया बसे १२ बर्षे बालक
बाल्यकालमा लगाएको प्रेम बुढेसकालमा साकार पार्दै यी ८० वर्षीय पुरूषले ७५ वर्षीया महिला संग गरे बिबाह
केटाको खडेरी लागेपछि सामूहिक बिहेको अपिल गर्दै सुन्दरीहरु